झाँक्रीबाट ‘खोसेर’ अस्पतालमा, जुट्यो रगत जोगियो ज्यान
ब्लड वैंक छैन, रगत पनि छैन
प्रकाशित मिति: 2016-01-04
दिलिप खड्का, युनिक एफएम रुकुम
गर्भवती महिलालाई आफ्नै रगत दिएर जिल्ला अस्पताल मुगुका डाक्टरले ज्यान जोगाएका थिए
रुकुम, २० पुस ।
सुत्केरी भएको तीन दिन बितिसक्दा पनि रगत रोकिएन, रगत पनि पाइएन जाजरकोटमा केही समय अगाडी ३६ वर्षिया कमला बुढाको ज्यान गयो ।
रक्त अल्पताले थलिएकी बाजुरा जुगाडाकी २५ वर्षीया वसन्ती रोकायाले समयमा रगत पाउन सक्दा त्यसको केही दिनमा मृत्यु भएको खबर आयो ।
पूर्वी वा पश्चिमी पाहाडमा रगत अभावमा, रगत नपाउँदा ज्यान गुमाएका यस्ता घटना हरेक बर्ष दोहोरिरहेका हुन्छन् ।
तर रुकुमको खोलागाउँका २६ बर्षका विर्मि डाँगीलाई भने गाउँले नै नयाँ जीवन दिएका छन् । रगतको अभावमा मृत्युसंग लडिरहनु भएकी डाँगीलाई गाउँहरुको सल्लाहमा रगत दिएर जीवनदान दिएका हुन् ।
रुकुममा अत्याधिक रक्तश्रावबाट ज्यान जोखिममा परेकी डाँगीको ज्यान जागोउन ब्लड बैँकमा समेत रगतको अभाव थियो ।
खोलागाउ गाविस वडा नं. ६ का २६ बर्षका विर्मि डाँगीलाई स्थानीय चारजना व्यक्तिले एवि. ग्रुपको ४ पिन्ट रगत दान गरेपछि ज्यान जोगिएको हो ।स्थानिय २६ वर्षिय शिक्षक राम वहादुर वली, २२ बर्षका टेक वहादुर परियार,२१ वर्षिय खकेन्द्र वली र २० बर्षका डण्डवीर केसीले रगत दान गर्नु भएको थियो ।
धामी झाँक्रीको साहारामा घरेलु उपचार अपनाईरहेको बेला छिमेकी प्रेम वहादुर केसीको पहलमा डांगीलाई चौरजहारी अस्पतालमा पुरयाइएको थियो । अस्पतालमा चिकित्सकले रगत नभएको बताएपछि स्थानियको सल्लाहमा रगत दान गरिएको थियो ।
सामान्य तया स्वास्थ्य व्यक्तिको शरीरमा ११ देखि १४ होमोग्लोविन हुनु पर्नेमा डांगीको शरिरमा अत्यधिक रक्तश्राव भई २ ग्राम मात्र रगतको मात्रा रहेको अस्पतालका वाल रोग विशेषज्ञ डा. कालिव वुढाले जानकारी दिनुभयो । ३ जना छोरीको जन्म दिएकी डांगीका श्रीमान भारतमा मजदुरी गर्न जानु भएको छ ।
ब्लड वैंक छैन रगत पनि छैन
रुकुममा ब्लड वैंक नहुदा विभिन्न समयमा रक्तअल्पता सम्वन्धि समस्या भएका व्यक्तीहरुको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको छ ।
चौरजहारी अस्पताल र नेपाल रेडक्रस शोसाईटी उपशाखा चौरजहारीले रगत संकलनको लागी विगतका वर्षहरुमा शिविर मार्फत करिव ३ सय व्यक्तिहरुको रगत समुह छनौट गरेको थियो । तर, उनीहरुमध्यबाट हालसम्म कसैले पनि रगतदान गरेका छैनन ।